အသက် ၈၅ နှစ်အရွယ် ပါကစ္စတန်နျူကလီးယားသိပ္ပံပညာရှင် အဗ္ဗဒူလ်ကာဒီယားခန်း ကွယ်လွန် - Xinhua News Agency
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ နျူကလီးယားသိပ္ပံပညာရှင် အဗ္ဗဒူလ်ကာဒီယားခန်း သည် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်က အစ္စလာမ်မာဘတ်မြို့အနီး Rawalpindi ၌ ပြုလုပ်သည့် ရှေ့နေများညီလာခံသို့ တက်ရောက်လာသည်ကိုတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အစ္စလာမ်မာဘတ် ၊ အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ နျူကလီးယားအစီအစဉ်ကို ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုခဲ့သူ နျူကလီးယားသိပ္ပံ ပညာရှင်ကြီး အဗ္ဗဒူလ်ကာဒီယားခန်းသည် အသက် ၈၅ နှစ်အရွယ်တွင် လည်ချောင်းရောဂါဝေဒနာများဖြင့် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်း၏ မိသားစုဝင်က ပြည်တွင်းမီဒီယာသို့ အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
ပါကစ္စတန်နျူကလီးယားဖခင်ကြီး ခန်းအား အစ္စလာမ်မာဘတ်မြို့တော်ရှိ ခန်းသုတေသနဓာတ်ခွဲဆေးရုံ(Khan Research Laboratories Hospital)သို့ အရေးပေါ်တင်လိုက်ပြီးနောက် စနေနေ့ညပိုင်းတွင် ၎င်း၏ရောဂါအခြေအနေမှာ စတင်ဆိုးရွားလာခဲ့ကြောင်း ၎င်း၏ မိသားစုဝင်များပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
ပြီးခဲ့သော ဩဂုတ်လ အစောပိုင်းက ခန်းသည် COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပြီးနောက် ယင်းဆေးရုံသို့ပင် တက်ရောက်ကုသမှုခံယူခဲ့ရသေးသည်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါမှ သက်သာပျောက်ကင်းသွားပြီးနောက်တွင် သူသည် နေအိမ်သို့ ပြန်သွားခဲ့ကြောင်း ပါကစ္စတန်အစိုးရအရာရှိများ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် အီမရန်ခန်း (Imran Khan) က နျူကလီးယားသိပ္ပံပညာရှင်ကြီး ကွယ်လွန်သွားခြင်းအတွက် မိသားစုနှင့်ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်းကြေကွဲကြောင်း ၎င်း၏တွစ်တာလူမှုကွန်ရက်တွင် ထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့ပြီး “ သူဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ အချစ်ခံရသူပါ ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့သိပ်ကိုအရေးပါလုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ပဲ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကို နျူကလီးယားလက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်စေခဲ့တာပါ” ဟု ဆိုသည်။
“ ပါကစ္စတန်ပြည်သူတွေအတွက်တော့ သူဟာ နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပါပဲ” ဟု ဝန်ကြီးချုပ်က ဆိုသည်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသမ္မတ Arif Alvi ကလည်း နျူကလီးယားသိပ္ပံပညာရှင်ကြီး အဗ္ဗဒူလ်ကာဒီယားခန်းသည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအား နျူကလီးယားခြိမ်းခြောက်မှုမှ ကာကွယ်နိုင်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး ကျေးဇူးတရားသိတတ်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် သူ၏တီထွင်ဖန်တီးမှုအပေါ် မည်သည့်အခါမျှ မေ့ပျောက်ပစ်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း” ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Pakistani nuclear scientist Abdul Qadeer Khan dies at age of 85
Pakistani nuclear scientist Abdul Qadeer Khan attendsalawyers convention in Rawalpindi near Islamabad on Jan. 9, 2010.
ISLAMABAD, Oct. 10 (Xinhua) — Pakistani nuclear scientist Abdul Qadeer Khan, who is the founder of Pakistani nuclear program, passed away over lung problems on Sunday at the age of 85, his family confirmed to local media.
Khan’s health condition started deteriorating on Saturday night, after which he was rushed to the Khan Research Laboratories Hospital in the capital Islamabad, according to his family members.
Pakistani Prime Minister Imran Khan expressed his condolences to the family of the nuclear scientist, saying on Twitter that he was loved by the nation because of “his critical contribution in making Pakistananuclear weapon state.”
Pakistani President Arif Alvi said inatweet that the nuclear scientist has helped Pakistan “develop nation-saving nuclear deterrence, andagrateful nation will never forget his services in this regard.”